samedi, 25 janvier 2020 22:20
Fampandrosoana ny baolona kitra: Nisy fikaonandoham-paritra ho fakan-kevitra natao teto Antsirabe
Tontosa androany sabotsy 24 janoary, tao amin’ny Tranompokonolona Antsirabe ny fikaonandoham-paritra ho fakan-kevitra hampandrosoana ny baolona kitra eto Madagasikara, anjaran’ny ligin’ny baolina kitra Vakinankaratra. Nitarika ny delegasionan’ny Federasiona Malagasin’ny baolina Kitra nanotrona izany teto an-toerana ny filohany, Atoa Arizaka Rabekoto Raoul. Ireo misehatra ny baolina kitra no nasaina tamin’ity, nahitana toeram-panofanana sy ny sekolin’ny baolina kitra eto Vakinankaratra, ireo seksiona niisa 7, ary ireo klioba sy mpitantana klioba.
mardi, 21 janvier 2020 13:46
Kianja Barea: Narodana ireo « tribunes latérales » roa etsy Mahamasina
Miroso ny fandravana ireo fotodrafitrasa hasiam-panavaozana etsy Mahamasina, hanorenana Kianja Barea. Ny fandravana ireo « tribunes latérales » roa no nisantarana azy, taorian’ny famefena ny faritra tsy ho azon’ny besinimaro ifemezivezena. Raha ny tetiandro dia haharitra 18 volana ka hizara roa ny fizotry ny asa. Hisantarana ny azy ny « tribunes » izay harodana ary havaozina tanteraka ka hovitaina mialoha ny 26 jona 2020. Hitohy hatramin’ny volana jona 2021 ny asa. Hahazaka mpijery 40 880 ny kianja rehefa vita, ka 15 536 ny toerana eny amin’ny « tribunes », hiampy toerana vaovao miisa 9 704 ny eny amin’ny « gradins », ankoatra ireo 15 640 amin’izao fotoana izao.
mercredi, 15 janvier 2020 20:38
Kitra – CAN 2021: Hatao ny volana janoary sy febroary toy ny tany aloha
Hotanterahina ny 9 janoary ka hatramin’ny 6 febroary 2021 ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, na ny CAN 2021, izay hatao any Cameroun. Vanimpotoanan’ny orana ny jona sy jolay any Cameroun, tsy toy ny tany Egypta ny taona 2019, ka izay no nandrosoana azy ho janoary-febroary, araka ny tapaka nandritra ny dinika nifanaovan’ny mpitondra any Cameroun sy ny mpitantana ny Kaonfederasiona afrikana amin’ny baolina kitra (CAF) tao Yaoundé, androany 15 janoary 2020. (Jereo sary Tohiny)
mercredi, 15 janvier 2020 19:42
Nicolas Dupuis: Laharampahamehany ny hampakarana hatrany ny lentan'ny baolina kitra Malagasy
« Consultant » na manampahaizana manokana miara-miasa amin'ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena i Nicolas Dupuis ankehitriny. Manana birao fiasany manokana etsy amin’ny lapan'ny Fanatanjahantena Mahamasina ny tenany, nanomboka ny talata 14 janoary 2020 . Nambaran’i Tinoka Roberto, Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, nandritra ny fanolorana io birao sy fitaovana hiasan’i Nicolas Dupuis fa noho ny ezaka goavana nataon'ity Mpanazatra ity dia tafiditra anisan'ireo sangany aty Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy. « Noporofoinao hoy Minisitra ny fitiavanao ny Barea, satria na dia teo aza ireo antso sy tolotra mampilendalenda avy amin'ireo tarika matanjaka, taorian'ireny vokatra manan-tantara tamin'ny CAN 2019 ireny, izay nahatafakatra an'i Madagasikara tany amin'ny ampahefa-dalana, dia tsy naharototra anao noho firaiketam-ponao amin'ireo mpilalao sy ny fankatoavanao ny fiangaviana ny tenanao hanohy ny asa maha mpanazatra, avy amin'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fitiavana lehibe indrindra izany ! »
Hanomboka ny asa fanavaozana ny kianjan’i Mahamasina mba hanara-penitra. Mitentina 77 tapitrisa dôlara, vola madiodion’ny fanjakana malagasy, ny asa fanamboarana izay haharitra 18 volana, izay hitsinjara in-droa miantoana. Hisantarana azy ny « tribunes » izay harodana ary havaozina tanteraka ka hovitaina mialoha ny 26 jona 2020. Hitohy hatramin’ny volana jona 2021 ny asa. Hitondra ny anarana « Kianja BAREA » rehefa vita. Hahazaka mpijery 40 880 ny kianja rehefa vita, ka 15 536 ny toerana eny amin’ny « tribunes » hiampy toerana vaovao miisa 9 704 ny eny amin’ny « gradins » ankoatra ireo 15 640 amin’izao fotoana izao.
jeudi, 26 décembre 2019 15:21
Kitra: Notoloran’ny filoha « prime » mitentina 1 tapitrisa Ariary tsirairay avy ny Barea U20 vehivavy
Noraisin’ny filoha Andry Rajoelina tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra androany alakamisy 26 desambra ny Barea U20 vehivavy, izay nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny « Tournoi UFFOI 2019 » natao tatsy amin’ny Nosy Maorisy. Notoloran’ny fitondram-panjakana « prime » mitentina 1 tapitrisa Ariary tsirairay avy ireo mpilalao miaraka amin'ireo mpikarakara ara-teknika noho izao vokatra azo izao, izay sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nibatan’ny ekipam-pirenena vehivavy io amboara io.
jeudi, 26 décembre 2019 12:08
Kitra: Hisokatra ny AJESAIA Mampikony
Hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny Zoma 27 desambra 2019 ny AJESAIA (Association des JEunes Sportifs de l'Avenir Inter-Arrondissement) Mampikony. Tonga eto an-tanindrazana hanome voninahitra manokana ny lanonana i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea an’i Madagasikara ankehitriny, izy izay mpilalao fahiny tao amin’ny AJESAIA, sady zanaky ny Distrikan’i Mampikony rahateo koa. Isany hanamarika ity fotoana ity ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan'ny AJESAIA (Pro League) amin’ny AS Justice D1 Mampikony hatao ao amin’ny Kianja Monisipaly. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 23 décembre 2019 08:50
Sary nindramina Net
Espaina: Nahatsiaro ireo zaza sahirana ny mpanohana ny ekipan’ny Betis Séville amin’izao Noely izao
Hetsika hafakely no nataon’ireo mpanohana ny ekipan’ny Betis Séville any Espaina amin’izao ankatoky ny Noely izao. Samy nivimbina « peluche » ka natsipin’izy ireo teny ambony kianja rehefa vita ny lalao nifanandrinan’ny Betis Séville sy ny Atlético, omaly, ho fanohanana ireo ankizy sahirana amin’izao fankalazana ny Noely izao. Niondrika teo anatrehan’ny Atlético tamin’ny isa 2 noho 1 ny Betis Séville io omaly io. (Jereo Sary Net)
lundi, 23 décembre 2019 08:47
Baskety – Africa League TOP 16: Patriots 94 # 63 GNBC
Niondrika tamin’ny isa 94 noho 63 nanoloana ny Patriots BBC Rwanda ny GNBC Madagasikara, nandritra ny lalao famaranana omaly tao Kigali renivohitr’i Rwanda. Tsy nahavita nanala vela ny GNBC. Tombony ho an’ny Patriots ny mpijery maro, izy rahateo nilalao teo an-taniny. Nanome voninahitra ity lalao famaranana omaly ity ny filohan'i Rwanda, Paul Kagame, izay niaraba manokana ny GNBC. Laharana faharoa tamin’iny fifaninanana ho an’ny faritra atsinanan’i Afrika iny ny GNBC, ekipan'ny Zandarimariam-pirenena Malagasy, ary dia tafiditra ho isan’ireo ekipa 12 mendrika aty Afrika, hifaninana hiady ny tapakila hiadiana ny tompondaka erantany indray manomboka amin’ny febroary 2020. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 22 décembre 2019 22:23
Kitra – UFFOI U20 zazavavy: Tompondaka ny Barea Madagasikara
Nahazo isa 10 tamin’ny lalao efatra vitany, ka fandresena telo sy ady sahala iray. Izay vokatra izay no nitondra ny Barea Madagasikara sokajy zazavavy latsaky ny 20 taona, ho tompondakan’ny UFFOI (Union des Fédérations de Football de l'Ocean Indien) taona 2019 nandritra ny fifaninanana natao tatsy amin’ny nosy Maorisy. Vondrona tokana no nisy ireo nosy dimy nandray anjara, ka teo amin’ny laharana faharoa taorian’i Madagasikara i La Réunion, fahatelo i Mayotte, fahaefatra i Maorisy mpampiantrano, ary fahadimy ny nosy Rodrigues. Tsy nandray anjara i Seychelles. (Jereo Sary Tohiny)